Filtrer les éléments par date : lundi, 08 juillet 2019
Notendren’i Papa François, ho Eveka mpanampy ho an’ny Arsidiosezin’Antananarivo i Mgr Andriantsoavina Jean Pascal.
Pretra diosezanina eto Antananarivo izy, efa « Recteur » ny seminera zokiny fandalinana filozofia tao Antsirabe teo aloha, ary efa « Curé » tao amin’ny Fiangonana “ Notre Dame de l’Assomption ” Imerinafovoany Antananarivo.
Evekan’ny Diosezin’Ambanja i Mgr Rosario Vella nialoha ny nanendren’i Papa François azy ho Evekan’ny Diosezin’i Moramanga. Mgr Saro no fiantsoan'ny maro azy.
Lasa Evekan’ny Diosezin’i Farafangana i Mgr Gaetano Di Pierro Evekan’i Moramanga teo aloha, napetraka tamin’ny fotoana nanandratana ho Olontsambatra an’i Lucien Botovasoa tamin’ny taon-dasa.
lundi, 08 juillet 2019 20:39
Kitra-CAN 2019: Ho fantatra anio ireo ekipa roa farany hiatrika ny ampahefa-dalana
Lalao ampahavalon-dalana miisa roa no voalahatra hotanterahina anio alina. Hisantatra izany, amin’ny 7ora alina ora eto Madagasikara, ny fihaonan’i Côte d’Ivoire amin’i Mali. Amin’ny 10ora alina kosa i Ghana hifandona amin’i Tonizia. Izay tafavoaka mpandresy amin’ity lalao faharoa ity no hifanena amin’i Madagasikara eo amin’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, taona 2019.
lundi, 08 juillet 2019 14:27
Mandria ampiadanana Zandry, Jaona Elite
Mandria ampiadanana Zandry, Jaona Elite.
Mirary fihononana ho an'ny fianakaviana.
lundi, 08 juillet 2019 13:38
Begavo 2 – Ambanja: Nodimandry tampoka ny lehiben’ny Fokontany
Nentanin-kafaliana tamin’ny baolina matin’i Ibrahim Amada, sady baolina voalohany maty nandritra ny fihaonan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Léopard RDC ilay Sefo Fokontany Begavo 2 – Ambanja ka tratry ny tsy fahasalamana tampoka, nitarika fahafatesany. Heverina ho fahatapahan’ny lalàndra no nahazo azy.
lundi, 08 juillet 2019 13:35
Kitra-CAN 2019: Niarahaba ny Barea ny Vondrona Eorôpeana
Niarahaba sy nandefa firariantsoa ho an’ny Barea sy ny Malagasy tsy vakivolo ny Vondrona eorôpeana eto Madagasikara, taorian’ny fandresena miezinezina azon’i Madagasikara nanoloana an’ny Léopard RDC, tamin’ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra omaly.
Tsy isalasalana, hoy ny fanambarana, fa tena mahavelom-panantenana ity ekipa malagasy ity, ary taratry ny hoavy mamirapiratra sahady.
lundi, 08 juillet 2019 10:04
Fitsarana fiarakodia: Tambazotra roa, mpanao hosoka sarona
Nandritry ny hetsika fidinana tampoka nataon’ny teo anivon’ny Foibe fitsarana fiarakodia, niarahana niasa tamin’ny Foibe manao fikarohana fandikan-dalàna ao amin’ny Toby Ratsimandrava ny 02 hatramin’ny 05 jolay, dia tambazotra 2 mpanao hosoka amin’ny fanaovana antotan-taratasy momba ny « visite technique » no sarona.
Olona miisa 08 ireo voasambotra, ka ny 05 tamin’ireo dia nanao taratasy hosoka, izay tokony alaina eny amin’ireny Ivon-ketra ireny. Ny 03 kosa dia manamboatra ary manome taratasy na « visite technique » hosoka ivelan’ny Ivon-toerana fitsaràna fiarakodia.
Tratra nandritra ny fisavana ny tranon’ireto olon-dratsy ireto ny antotan-taratasy maromaro hosoka, fitomboka sy ireo fitaovana informatika maromaro toy ny “imprimante” sy “ordinateur”. Atao fanadihadiana izy ireo ary hatolotra ny Fampanoavana aorian’izay.
lundi, 08 juillet 2019 09:55
Kitra – Mondial vehivavy: Noporofoin’i Etazonia fa mbola izy no matanjaka
2 noho 0 io no nandresen’i Etazonia an’i Pays-Bas tamin’ny lalao famaranana ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, sokajy vehivavy, natao tany Lyon – Frantsa.
Fanin’efatra izao ny Amerikana no tompondaka erantany.
lundi, 08 juillet 2019 09:31
Kitra-Copa America: Norombahan’i Brezila fanin-tsiviny ny Amboara
Resin’i Brezila 3 noho 1 i Pérou tamin’ny famaranana natao halina tao amin’ny kianjan’i Maracana ao Rio de Janeiro, io fandresena io no nandrombahany ny amboara, ary fanin-tsiviny izao.